Isitolo sokudla kwasolwandle okuyi-Wholesale Bardetta - Messina
NgoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu: 6:00 am - 14:00 pm / 16:30 pm - 19:30 pm
NgoMgqibelo nangeSonto: 6: 00 - 14: 00
EMessina, iminyaka engaphezu kwengu-40, Ukuzalela kanye Nezitolo Zasolwandle
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-18)
Isitolo sokudla kwasolwandle eBardetta, e-Via Pantanello 4 Località Torre Fare Messina, uyinkampani ezikhethekile kwezentengiso ye Ukudla kwasolwandle. I -markmark endaweni ye Messina ukulethwa kwe Ukudla kwasolwandle kwezindawo zokudlela, amahhotela nezitolo, ngenxa yobungcweti nekhwalithi yemikhiqizo, Ukudla kwasolwandle iBardetta, iyafana nesiQinisekiso.
I-Seardood Bardetta eTorre Faro (Messina) - Ukudla kwasolwandle kwekhwalithi ephezulu kakhulu
Ukudla kwasolwandle iBardetta, e Torre Faro (Messina), uwenana Isiqinisekiso esivela kude, njengomlando waso nokuhlangenwe nakho kwaso: sivela olwandle, isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-40 sinikezelwe ekunakekelweni nasekwelapheni ama-molluscs ngokuya ngamasu avuselelwe futhi aphelele nezindlela zokuzihlanza, nangaphansi ekukhetheni okuhle kakhulu Ukudla kwasolwandle ukuthengiswa ngokuphelele. IBardetta, a Messina, inikeza amakhasimende ayo uhla olubanzi Ukudla kwasolwandle yekhwalithi ephezulu kakhulu futhi ihlale imisha. Ukudla kwasolwandle iBardetta sekuneminyaka engaphezu kwengu-40 esebenza ngayo zohlobo, khetha, sebenza nokuthengisa izinto ngokweqile Ukudla kwasolwandle. Le nkampani, ebesebenza emkhakheni wezinhlanzi izizukulwane ngezizukulwane, yenze iFreshness neKhwalithi amanani aqondisayo omsebenzi wayo ihlala isuselwa kumasu wokuzalela, wokuhlanza nawokuzihlanza anamazinga aphezulu. Ukuthengiswa okuphelele kuhloswe kubathengisi bezitolo, izinhlanzi kanye namabhizinisi wokupheka. Ngaphezu kwalokho, Ukudla kwasolwandle iBardetta inika ithuba lokuthenga imikhiqizo yayo ukujabulela ubuhle nokunambitheka okwenziwa ulwandle lwethu.
I-Seardood Bardetta e-Torre Faro (Messina) - Isiko nokwenziwa kwezinto ezintsha
Ukudla kwasolwandle iBardetta, e-Via Pantanello 4 Località Torre Fare Messina, inokuzala kwayo kwe Ukudla kwasolwandle enhliziyweni Capo Peloro Natural Reserve. Isikhundla sayo esinenhlanhla senza ukuzalaniswa kwe IBardetta indawo ekahle i Ukudla kwasolwandle: gngenxa yobumbano lwayo nolwandle ngesiteshi sesiNgisi, ukushintshanisa okuqhubekayo nangokuqhubekayo kwamanzi olwandle ahlanzekile kuqinisekiswa yimisinga ye Umzila we-Messina. Ekuzaleni, ngaphakathi kwePantano Piccolo Lake, i Ukudla kwasolwandle ukujabulela ukuhlanzwa njalo kwamanzi olwandle. Ngaphezu kwalokho, Ukudla kwasolwandle iBardetta, a Messina,kuyinto engokoqobo futhi evele ivela njalo, empeleni kuphakathi kwezitshalo ezimbalwa ezise-Eastern Sicily ukusebenzisa amathangi okuthola ukwelashwa kwesizukulwane sakamuva. Sibonga u Amathangi okuhlanza anikezwe ngamanzi olwandle ahlanzekile, ama-molluscs bukhoma abekelwe isikhathi esidingekayo sokuqeda i-slag nokungcola, ukuze afinyelele izidingo ezihlanzekile zokuhlanzeka ukuze azenze zikulungele ukusetshenziswa. Ukudla kwasolwandle iBardetta, a Messina, kubukeka njengenyunyana ephelele yeSiko futhi Umqondo wezobuchwepheshe kanye nobungcweti: Indaba yomndeni evela kubaba kuya endodaneni ihlala ikunikeza okungcono kakhulu.
UFrutti di Mare Bardetta eTorre Faro (Messina) - Ukuhlanzeka, Inhlanzeko nokuphepha
Ukudla kwasolwandle iBardetta, etholakala kuCapo Peloro Nature Reserve eTorre Faro (Messina), isizihlukanise ngeminyaka engaphezu kwengama-40 yokuba khona emkhakheni wezokudoba ngekhwalithi yemikhiqizo yayo, ngekhono layo lokugcwalisa ngokuphelele yonke inhlobo yesicelo, ukunakwa okunikelwe izidingo zamakhasimende kanye nekhono lokunikeza Inkonzo Yezidingo Zasekhaya. Izinhlobo eziphambili Ukudla kwasolwandle athengisiwe yile: Mussels, Clams, Sea Lupins, Oysters. Izizukulwane, IBardetta sipho Ukudla kwasolwandle wekhwalithi engenakuqhathaniswa, Ukuqokwa kanye Nokubusha, okuhlukaniswa ukusetshenziswa kwezindlela ezintsha, okwazi ukuthobela wonke amazinga aphakeme kakhulu we-Inhlanzeko Yezokuphepha Nokudla.
UFrutti di Mare Bardetta eTorre Faro (Messina) - Okuhamba phambili Kwaselwandle
Ukudla kwasolwandle iBardetta, e-Via Pantanello 4 Località Torre Fare Messina, uyinkampani ezikhethekile kwezentengiso ye Ukudla kwasolwandle. Ukudla kwasolwandle iBardetta, a Messina, kuyinto engokoqobo futhi evele ivela njalo, empeleni kuphakathi kwezitshalo ezimbalwa ezise-Eastern Sicily ukusebenzisa amathangi okuthola ukwelashwa kwesizukulwane sakamuva. Ukudla kwasolwandle iBardetta, a Messina, kubukeka njengenyunyana ephelele yeSiko futhi Umqondo wezobuchwepheshe kanye nobungcweti: Indaba yomndeni evela kubaba kuya endodaneni ihlala ikunikeza okuhle kakhulu. Uma ufuna Ukudla kwasolwandle Ikhwalithi, Okusha futhi kuhlolwe ngokucophelela amazinga wokuhlanzeka nokuphepha, khetha Ukudla kwasolwandle iBardetta a Messina.
Ikheli: I-Via Pantanello, i-4 Torre Faro
Ucingo: 090 325488
Yefeksi: 090 327463
Inombolo ye-VAT: 03288370830